Agwaetiti Cayman: Ihe karịrị ọkara nde ndị nlegharị anya na 2019
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Mmelite nke Njem njem » Agwaetiti Cayman: Ihe karịrị ọkara nde ndị nlegharị anya na 2019
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Cayman Islands • Ịtụ egwu • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • Resorts • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
The Cayman Islands mechiri afọ iri ahụ site na ndị na-agbasa ikuku na-agbasa, na-egosipụta afọ ọzọ nke uto na-agbanwe agbanwe na ikuku na ụlọ. Maka afọ kalenda nke 2019, ndị mbata ụgbọelu ruru 502,739 nke na-anọchite anya mmụba pasent 8.6 n'otu oge ahụ na 2018-ma ọ bụ mmadụ 39,738 ọzọ. Nke a bụ ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke nleta anya na akụkọ ihe mere eme (karịa Jan-Dec 2018) na nke iri na-esote afọ nke uto kwa afọ na nleta nleta.
N'ozuzu ya, ndị isi ahịa ahịa maka ndị mbata na-aga n'ihu na-aga n'ihu na nnukwu mmụba ha na mmụba nke ndị mbata site na United States (33,293 karịa ndị ọbịa karịa 2018), Canada (3,525 karịa ndị ọbịa karịa 2018), na United Kingdom (ndị ọbịa 829 karịa 2018).
Dabere na ọnụ ọgụgụ ndị Cayman Airways nyere, ndị mbata Cayman Brac-nke gụnyere ma ndị ọbịa na ndị bi na ya - ruru pasent asaa, ihe dịka ndị njem 4,350 ọzọ na 2019 ma e jiri ya tụnyere 2018 ma gbakọta ndị njem 62,911 na 2019 - ndekọ ọhụrụ maka ụzọ a. Maka Little Cayman, enwekwara ndekọ ọhụrụ na mbata nke ndị ọbịa na ndị bi na ya, yana ndị njem 30,537 - ọtụtụ ndị bịarutere mgbe ọ bụla.
Ọganihu dị ukwuu nke nleta maka agwaetiti atọ ahụ jigidere ụzọ na-aga elu n'ime afọ ise gara aga. Na 2015 ebe a nabatara ndị ọbịa 385,378, na na 2019 enwere 502,739 nke ruru uto nke 30.5 pasent ma ọ bụ ndị ọbịa 117,361. Maka oge mbụ n'akụkọ ihe mere eme Cayman, ọnwa atọ n'otu afọ kalenda ruru ihe karịrị ndị ọbịa 50,000 na-aga eleta n'ụsọ mmiri anyị - Machị, Julaị, na Disemba 2019. Na mkpokọta, ewezuga Septemba 2019, mba ahụ mebiri ndekọ mbata gara aga maka ọnwa 11 n'ime. 12.
N'ịtụgharị uche na mmetụta dị mma nke uto a na ndị mbata na mbata mepụtara, Onye Mịnịsta Na-ahụ Maka Njem Nleta Nleta Moses Kirkconnell kesara, "Kemgbe m bidoro ọrụ m dị ka Mịnịsta maka njem nleta, ọ bụ ebum n'uche gọọmentị m na site na atụmatụ njem nleta anyị ga-emepụta mmetụta dị mma. n'ofe agwaetiti atọ niile na-eme ka ndụ ezinụlọ Caymanian ka mma. Anyị maara na njem nleta na-enye ọtụtụ ohere-site na azụmaahịa na ịkekọrịta ọdịbendị anyị-nke na-enye ndị anyị ike ịme ọfụma na nke onwe ha. Nke a abụrụla ihe anyị lekwasịrị anya n'ime afọ ise gara aga ma ga-anọgide na-abụ isi kachasị mkpa maka anyị ịga n'ihu.
N’ịkwado ọrụ nke Ngalaba Na-ahụ Maka Njem Nleta, Cayman Airways na ọtụtụ ndị njem metụtara njem ahụ, Mịnịsta ahụ kwuru wee sị, “Afọ ole na ole gara aga, mụ na gọọmentị m gbara Ngalaba nke njem na ndị otu anyị aka ka ha rute ahịa ọhụrụ ma mepụta ohere uto maka anyị. mpaghara ndi njem. Ọnụ ọgụgụ ahụ na-ekwuchitere onwe ha — ihe karịrị mmadụ 502,000 họọrọ ụlọ anyị — otu agwaetiti atọ dị ala ma nwee ọtụtụ ihe anyị ga-enye — iji mee ka nrọ ha mezuo site n'ịbịa Cayman Islands. Ngalaba na-ahụ maka njem nleta gbagoro ihe ịma aka ahụ site n'ọtụtụ ụzọ na ụzọ okike, na anyị niile kwesịrị inwe obi ụtọ maka nsonaazụ a dị ịtụnanya. "
Otu mpaghara uto dị na ngalaba ụlọ obibi nke ụlọ obibi ndị njem ikike ọhụrụ. “Ọ bụ nnukwu obi ụtọ na Ngalaba Na-ahụ Maka Njem Nleta nwere ike inyere ọha na eze aka ịghọta na njem nleta metụtara mmadụ niile. Anyị na-agbasi mbọ ike ịnabata usoro njem na mbido ma hụ na agwaetiti Cayman ga-anọ n'ihu oge mgbe ọ bịara inye ndị ọbịa anyị nrọ na-enweghị isi, ájá na ezumike mmiri, "Oriakụ Rosa Harris, Director, Ngalaba Nleta Nleta nke Cayman Islands kwuru .
Ma, imekọ ụlọ bụ otu akụkụ nke usoro maka ihe ịga nke ọma na 2019. "Ndị anyị na ha nwere nghọta ghọtara mantra nke m na-ejikarị mgbe m na-atụle ihe na-eme ka anyị nwee ihe ịga nke ọma: 'Airlift bụ oxygen anyị'," ka Oriakụ Harris kwuru. “Mụ na ndị otu m tinyere mgbalị siri ike iji kwado ma tolite mmekọrịta mmekọrịta ụgbọ elu siri ike iji hụ na ikike ụgbọ elu na oge ụgbọ elu n'afọ niile na-echekwa ma bawanye ebe ọ bụla enwere ike. Nke a na-abawanye oge ịnweta ndị ọbịa anyị, tinyere ọrụ pụrụ iche Caymankind na ahụmịhe pụrụ iche na mba anyị, na-enyere anyị aka ịzụlite azụmaahịa na ịdebe ndekọ nleta. " Airlift si na isi mmalite ahịa ndị ọbịa maka ebe a gosipụtara mgbasawanye dị ukwuu na 2019, ma ọ bụ site na ọrụ ka ukwuu ma ọ bụ ụgbọ elu ọhụrụ na-efe mba ahụ.
Mgbasa ozi ụgbọ elu ndị ama ama na 2019 meghere ụzọ maka afọ na-aga nke ọma ma setịpụ ohere nke nnweta ndị ọbịa na 2020. Ndị a gụnyere:
- Onye ọrụ ụgbọelu mba Cayman Airways laghachi na Denver na Disemba 2019 site na August 2020 na ọrụ ọrụ izu abụọ.
- American Airlines kwupụtara ọrụ ọrụ oge ọzọ sitere na Boston na ọrụ ọhụrụ site na JFK na 2020.
- Sunwing kwuputara mwepụta nke ọrụ na agwaetiti Cayman site na Toronto, Canada maka February 2020.
- British Airways webatara ụgbọ elu ọzọ na Tuesday.
- United Airlines na-agbanwe ụzọ Newark ha na ọrụ kwa ụbọchị site na Disemba 2019 ruo Eprel 2020.
- Southwest gbakwunyere Baltimore kwa oge, nke malitere na June 2019, na-abawanye ugboro ugboro na 2020
- Southwest na-ebugharị ọrụ Houston ha ịmalite na March kama mbubreyo mmiri na 2020 ma ga-enwe ọganihu kwa ụbọchị dịka nke June 2020.
- WestJet na AirCanada mụbara ugboro ole maka 2020.
Ikwuputa mantra nke Director, Hon. Deputy Premier kwukwara, sị, “Kwa afọ mụ na ndị otu m na Ministri na Ngalaba Na-ahụ Maka Njem Nleta na-arụsi ọrụ ike iji hụ na anyị na-eme ka mmụba kwa afọ na nleta site n'ọtụtụ ụzọ. Ọ bụ ezie na abamuru nke usoro atumatu bụ na anyị ga-esoro ndị ọbịa si n'akụkụ ụwa niile kerịta ala nna anyị mara mma, anyị ga-agarịrị na-achọpụta na njem nleta bụ azụmaahịa na akụ na ụba dị ike. Anyị na-ahụ maka ndị Cayman Islands iji hụ na anyị na-elekwasị anya na ịmepụta mpaghara nke mmepe akụ na ụba site na ọtụtụ njem na njem. Emeghi nke a n’enweghị isi; nyocha, ihe ohuru na echiche iji mepụta atụmatụ dabere na ihe okike na-enweghị atụ na-arụ ọrụ na ihe ịga nke ọma a. Tụkwasị na nke a bụ nkwa anyị mere ogologo oge iji mee ka usoro ọmụmụ ihe nlere anya nke ndị njem pụta na ụlọ akwụkwọ anyị site na nwata ruo ọzụzụ ọgbọ ndị ga-abịa n'ọdịnihu bụ ndị nwere ike irite uru na ọrụ ọrụ a n'afọ ndị na-abịa.
N'inwe obi ike na nchikota nke ụzọ ga-aga n'ihu na-eduga Cayman Islands ka ọ nwee ọganihu na-aga nke ọma na mmetụta akụ na ụba, Ngalaba nke njem na-aga n'ihu na atụmatụ 2020 na-arụ ọrụ, nke ntọala ya dabere na Atụmatụ Nlegharị Anya nke Mba. Oriakụ Harris kwuru, sị, "N'ime ihe niile anyị na-eme na ụlọ ọrụ anyị na-agba ume iji hụ na ọdịnihu nke njem na-aga, anyị ga na-eme atụmatụ maka ọdịnihu." “Dị ka ngalaba gọọmentị nwere ebumnuche nke ijikwa ụlọ ọrụ ndị njem na-arụ ọrụ dị elu, anyị ga-aga n’ihu ilekwasị anya na iche iche ahịa ahịa, mmekọrịta ọhụụ, na atụmatụ ịre ahịa ebe ọhụụ ga-aga n’ihu ịchụpụ ihe ịga nke ọma maka ndekọ Cayman Islands na afọ iri n'ihu.